Telegram lasa miasa bebe kokoa noho ny bot IFTTT | Vaovao IPhone
Telegram dia tsy rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra intsony, raha ny marina, efa ela izy io no nitsahatra. Miatrika tambajotra sosialy saika izahay. Tsapan'ireo tovolahy avy any Telegram fa amin'ny sehatry ny fandefasana sy fandraisana hafatra fotsiny dia tsy ho afaka hifaninana amin'ny WhatsApp mihitsy izy io. Noho izany, isaky ny fanavaozana vaovao dia manome antsika antony iray hafa hieritreretana fa fitaovana fifandraisana izany. Raha ny marina dia maro amintsika no tsy mieritreritra fiainana intsony raha tsy apetraka WhatsApp sy Telegram. TSARA Ity farany dia manohy manome antsika antony hampiasana azy, ary ankehitriny ny bot IFTTT dia tonga tamin'ny fampiharana fandefasan-kafatra feno indrindra eny an-tsena.
Ireo no vaovao natolotry ny fampiharana fandefasan-kafatra maraina lasa teo:
Inona no Vaovao ao amin'ny Version 3.15
- Apetaho eo an-tampon'ny lisitra ny resaka zava-dehibe mba tsy hahadino anao ny hafatra vaovao (safosio amin'ny ankavia ilay resaka ary avy eo paompy ny bokotra Pin vaovao).
- Ampifandraiso amin'ny serivisy an-jatony maro ny kaonty Telegram anao toa ny Twitter, Instagram, Spotify, Gmail, Pocket, Pinterest, Nest, Phillips Hue ary ny maro hafa. Fehezo ny fampiharana sy kojakoja amin'ny alàlan'ny Telegram, na mahazo hafatra rehefa misy zavatra mitranga any an-toeran-kafa. Miresaha amin'ny bot "If This Then That" (@IFTTT) hananganana ny fampidirana.
Amin'izany dia ho afaka hitantana tsara kokoa ny diantsika isika. Ho an'ireo tsy mahalala IFTTT dia fitaovana mandeha ho azy, ohatra, ampiasaiko izany mba hahafahanareo rehetra mamaky amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny Twitter-ko na Facebook-ko ny atiny avoakako amin'ity tranokala ity. SAINGY Manana fitaovana bebe kokoa tsy manam-petra izy io, saika izay rehetra tianao homena azyNoho izany, na manolo-tena ho matihanina amin'izany ianao na tsia, dia mamporisika anao izahay hanandrana ny bot IFTTT amin'ny Telegram. Toy ny mahazatra, Telegram dia azo alaina maimaimpoana amin'ny iOS App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Telegram lasa miasa bebe kokoa noho ny bot IFTTT